Waa tuma Xaawa Cabdi?: "Daljirka dahsoon ee ka soo shaqeysay danta Soomaalida" | Radio Hormuud
Dr Xawa Cabdi, waxay ahayd Soomaali u ololeyneysay xuquuqda dadka, qareen, iyo dhakhtar. Waa aasaasaha Xarunta Caafimaad ee Hooyada iyo Dhallaanka iyo hay'adda Doctor Xawa Cabdi Foundation.
Alle ha u naxariiste, Dr. Xaawa Cabdi Dhiblaawe ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Waxay ahayd aasaasaha hay'ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka.
Xaawa cabdi ayaa dhashay seddax carruur ah, oo mid ka mid ah uu dhintay sannadkii 2005. Waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho, 17 bishii May sanadkii 1947.
Waxbarashadeeda dugsiga hoose waxay ku qaadatay iskoolka Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho, halka dugsiga dhexena ay kaga baxday iskoolka Komarshaale.
Waxay dib ugu laabtay dalka, snnadkii 1972-dii, ka dib waxay shaqo ka bilowday isbitaalka Digfeer.
Guud ahaan xilligaas waxaa dalka ku yara haweenka bartay caafimmadka. Dr. Xawa Cabdi waxay si gaar ah ugu taqasustay cudurada Hooyada iyo dhallaanka.
2017 - Waxay ka mid ahayd 10-kii qof ee Jaamacadda Havard ay siisay shahaadada abaalmarinta ah Doctor of Laws
2015 - Abaalmarinta Horumarinta Nabadda ee Pilosio ayey ku guuleysatay
2014 - Xawa Cabdi waxay heshay Biladda Xoriyadda ee Roosevelt Four: Abaalmarinta oo lagu siiyay Middelburg, ee Netherlands waxaa loogu yeeraa Freedom from Want.
2012 - Xawa Cabdi waxaa loo magacaabay abaalmarinta Nobel Peace Prize.
2012 - Waxay heshay Abaalmarinta Dumarka Saameynta leh ee Hay'adda WITW Foundation; Abaalmarinta Arrimaha Gargaarka Bulshada ee Bet iyo Abaalmarinta Cadaaladda ee John Jay.
Xaawa Cabdi oo hawlaha samafalka bulshada ku soo jirtay tan iyo bilowgii dagaalada sokeye ee Soomaaliya, ayaa xarun caafimad oo ay ka faa'iideystaan hooyada iyo dhallaanka, ka furtay waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye.
"Isbitaalka waxaan ku bilaabay hal qol annigoo ugu daneynayay haqeenka foosha ay hayso, balse markii dambe wuu weynaaday oo wuxuu gaaray illaa afar boqol oo sariirood", ayay Dr. Xaawa ku sheegtay wareysi ay BBC-da la yeelatay sannadkii 2013-kii.
Markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, 1991, xarunteeda waxaa buux dhaafiyay dad ka cararayay colaadda, ka dibna waxay bilowday hay'addeeda DHAF si dadka ay u caawiso.
Dadkii ka hadlay geerideeda waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xassan Cali Khayre, oo sheegay in Dr Xaawa Cabdi lagu xusuusan doona kaalintii ay ka geysatay badbaadada ummaddeena, gaar ahaan kuwa nugul.
Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmana Cabdishakuur ayaa Xaawa ku tilmaamay "daljir daahsoonaa".
"Dr. Xaawa waxay ahayd samafale bulshada si naf-hur leh, xili adag uga soo shaqeysay. Waxay tusaale u tahay daljirka dahsoon ee danta guud ka shaqeeya, iyagoo Alle oo keli ah abaal iyo ajar ka doonaya. Allaha u naxariisto, sabar iyo iimaanna Allaha ka siiyo eheladeedii iyo ummada Soomaaliyeed oo idil", ayuu yiri.